The MYAWADY Daily: April 2017
ရွှေဒါးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာန နာယက ဆရာတော်၏ အန္တိမဈာပနပူဇာပွဲအတွက် အလှူ ငွေများပေးအပ်လှူဒါန်း
အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းဗိုလ်ရှိန် ရွှေဒါးပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်ကြီး ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာတော်၏ အန္တိမဈာပန ပူဇာပွဲအတွက် အလှူငွေ ပေးအပ်စဉ်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ရွှေဒါးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာတော်၊ ဘုရားနီမြတ်စွာဘုရားနှင့် ရတနာမဉ္ဇူမြတ်စွာဘုရား ဂေါပကအဖွဲ့တို့၏ သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော် သက်တော်ရှည် ဘဒ္ဒန္တကလျာဏမဟာထေရ် (သက်တော် ၁၀၀ နှစ်၊ သိက္ခာတော် ၈၀ ၀ါ) သည် ဧပြီ ၂၆ ရက်တွင် ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ရာ ဆရာတော်၏ ဥတုဇရုပ်ကလာပ်တော်အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းဗိုလ်ရှိန်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များက သွားရောက်ဖူးမြော်
ထို့နောက် တိုင်းမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည်ရွှေဒါးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကြီး၏ နာယက၊ ရွှေဒါးတိုက်ဆရာတော် မဟာဂန္ထ၀ါစကပဏ္ဍတိဘဒ္ဒန္တပညာသာမိထံ အန္တိမဈာပနပူဇာပွဲကျင်းပ နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များ မေးမြန်း လျှောက်ထားပြီး ဆရာတော်၏ သြ၀ါဒခံယူ၍ ဈာပနပူဇာပွဲအတွက် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် မိသားစုများက လှူဒါန်း သည့် အလှူငွေကျပ် ငါးသိန်းကို ပေးအပ် လှူဒါန်းသည်။ ဆရာတော်၏ အန္တိမဈာပနပူဇာပွဲကို မေ ၂ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
3042017 Yadanarpondaily by TheMyawadyDaily on Scribd
Posted by myawady at 11:00 AM No comments:
2942017 Myawadydaily by TheMyawadyDaily on Scribd
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဂျာမနီနိုင်ငံ Friedrich Ebert Stiftung- FES ဌာနချုပ်သို့ သွားရောက်လေ့လာ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် FES ၏ Executive Director ဖြစ်သူ Dr.Roland Schmidt တို့ ဆွေးနွေးစဉ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေး ခရီးရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ဘာလင်မြို့ရှိ Friedrich Ebert Stiftung- FES ရောက်ရှိရာ တာဝန်ရှိသူများကကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအား FES ၏ Executive Director ဖြစ်သူ Dr. Roland Schmidt မှ FES ဌာနချုပ်တွင် နံနက်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံကာ FES ၏ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် စစ်ဘက်-အရပ်ဘက် ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် FES ၏ Executive Director တို့မှ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြကာ အမှတ်တရဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။
Myanmar Tatmadaw goodwill delegation led by Senior General Min Aung Hlaing visits Friedrich Ebert Stiftung-FES headquarters in Germany
Senior General Min Aung Hlaing and party pose for documentary photo with FES Executive Director Dr. Roland Schmidt and party at Friedrich Ebert Stiftung-FES in Berlin.
The Myanmar Tatmadaw goodwill delegation led by Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing,currently on an official goodwill visit in Germany, went to Friedrich Ebert Stiftung-FES in Berlin, at 8.30 am local standard time today.They were welcomed there by officials.
Next, FES Executive Director Dr. Roland Schmidt hostedabreakfast to the goodwill delegation at the FES headquarters and explained the functions of FES. They then cordially discussed democratic reform and military-civilian relations.
After the discussion, the Senior General and the FES executive director exchanged gifts and hadadocumentary photo taken.
Chief of Defense of German Armed Forces General Volker Wieker hosts dinner to Senior General Min Aung Hlaing
Senior General Min Aung Hlaing attends dinner hosted by General Volker Wieker onboard MS Arcona.
The Myanmar Tatmadaw goodwill delegation led by Commanderin-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing who is on an official visit to Germany was hostedadinner by Chief of Defense of the German Armed Forces General Volker Wieker onboard MS Arcona Vessel at7pm local standard time on 27 April.
First, Senior General Min Aung Hlaing and Myanmar Tatmadaw goodwill delegation arrived at Yachtschiff Abion jetty in Berlin where they were welcomed by Chief of Defense of the German Armed Forces General Volker Wieker and officials. They had dinner onboard MS Arcona together. During the dinner, they enjoyed scenic beauties of Berlin along Spree River by vessel.
Then, the Senior General and the German General exchanged gifts.
2942017 Yadanarpondaily by TheMyawadyDaily on Scribd
ကောင်းမှုတော် စေတီတော်ကြီး၏ ရွှေထီးတော်အား ရွှေသင်္ကန်းနှင့် ရွှေပြားများ ပြန်လည်ကပ်လှူပူဇော်မှုကို မေလအတွင်း စတင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်
စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ ရာဇမဏိစူဠာ ကောင်းမှုတော် စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ရွှေထီးတော်အား ရွှေသင်္ကန်းနှင့် ရွှေစင်၊ရွှေပြားများ အလေ့အလွင့်မရှိ အောင်မြင်စွာ ကပ်လှူနိုင်ရေးအတွက် ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များ၊
သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရွှေလုပ်ငန်းပညာရှင်များ ဖြင့် ဧပြီ ၂၆ရက် နံနက်၁၁နာရီက ကောင်းမှုတော် စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ အစည်း အဝေးခန်း မ၌ အကြိုလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
''ရွှေထီးတော်အပေါ်ပိုင်းကို ရွှေအစစ် ရွှေစင်ရွှေပြားတွေ ကပ်လှူပူဇော်ဖို့အတွက် ဒီနေ့မှာ ရွှေလုပ်ငန်းရှင်ကို လုပ်ငန်းအပ် လိုက်ပါပြီ။ မေလ တတိယပတ်ထဲ လောက်ဆို စတင်ကပ်လှူနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်''ဟု ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ရာဇမဏိစူဠာ ကောင်းမူတော် စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ သြဝါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီးများ၏ သြဝါဒနှင့်အညီ စေတီတော်ကြီး၏ ထီးတော် အပေါ်ပိုင်း (ငှက်ပျောဖူးမှ စိန်ဖူးတော်ထိ)အမြင့် ၁၄ ပေ အား ရွှေစင် တစ်ကျပ်ခွဲသားရှိ ကိုးလက်မပတ်လည် ရွှေစင်ရွှေပြားများ ကပ်လှူပူဇော်ပြီး စုစုပေါင်း ရွှေစင်ရွှေပြား ၃၂၃ အပြား ကုန်ကျမည်ဟုခန့်မှန်း ထားကြောင်း၊ ထီးတော်ကြီး အောက်ခြေပိုင်း အမြင့် ၁၂ ပေကို မျက်ပါးရပ်မှ ရွှေဆိုင်းများကပ်လှူပူဇော်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ရွှေထီးတော်အား ရွှေသင်္ကန်းနှင့် ရွှေစင်၊ရွှေပြားများ ပြန်လည်ကပ်လှူရန် ရွှေပိဿာချိန် သုံးပိဿာကျော်ခန့် ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းငွေကျပ်သိန်း ၃ဝဝဝကျော်ခန့် ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း ဂေါပကအဖွဲ့ထံမှသိရသည်။
ရာဇာမဏိစူဠာ ကောင်းမှုတော် စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ရွှေထီးတော်အား ရွှေသင်္ကန်းနှင့် ရွှေစင်၊ရွှေပြားများ ပြန်လည်ကပ်လှူ တော့မည်ဖြစ် သဖြင့် အများပြည်သူ စေတနာရှင်များမှ ပါဝင်လှူဒါန်းလိုပါက ကိုး
လက်မပတ်လည် ရွှေစင်ရွှေပြား တစ်ချပ်လျှင် ငွေကျပ် ၁၂သိန်း နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မျက်ပါးရပ်မှ ရွှေဆိုင်းတစ်ဆိုင်းလျှင် ငွေကျပ် ၄၇ဝဝဝ နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း၊ လှူဒါန်းလိုသည့်
စေတနာရှင် ကုသိုလ်ရှင် များအနေဖြင့် ဂေါပကအဖွဲ့ရုံး ဝ၇၂-၂၁၅၄၅၊ဝ၉-၉၁ဝ၃ဝ၁၁၁ သို့ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လမ်းများအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ လမ်းပခုံးတိုးချဲ့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ညောင်ဦး-ကျောက်ပန်းတောင်း သွားကတ္တရာလမ်းကို မြတ်နိုးသူ ကုမ္ပဏီက BOT စနစ်ဖြင့် တာဝန်ယူ၍ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ပုဂံညောင်ဦးသို့ ဘုရားဖူးလာရောက် ကြသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဘုရားဖူး ဧည့်သည်များ ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်းစွာ မောင်းနှင်သွားလာ အသုံးပြုနိုင်ရေး အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် ကွင်းဆင်း၍ လမ်းများအဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း၊ လမ်းပခုံးတိုးချဲ့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုအချိန်တွင် ညောင်ဦးမြို့ အဝင်လမ်းမှာ ကျဉ်းမြောင်းနေ သည့်အတွက် ဘုရားဖူးယာဉ်များ၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ ယာဉ်တစ်စီးနှင့် တစ်စီးကျော်တက် မောင်းနှင်ရာ၌ အခက်အခဲများဖြင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊ ယာဉ်မောင်းနှင်သူများ ယာဉ်အန္တရာယ် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ သွားလာမောင်းနှင် နိုင်ရေးအတွက် ယခင်ကတ္တရာလမ်းအကျယ် ၁၈ပေ အစား လမ်းအကျယ် ၂၄ပေထိ လမ်းဘေး ဝဲ၊ယာလမ်း ပခုံးတိုးချဲ့ ခြင်းလုပ်ငန်း များကို ဧပြီ ၂၆ရက်က ညောင်ဦးမြို့အဝင် ပုဂံဘူတာလမ်းဆုံအနီး မှစတင်၍ ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည် ပိုမိုဝင်ရောက်ရန်မျှော်မှန်းထား
ယခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည် ဝင်ရောက်မှုနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ သိရသည်။
နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည် ဝင်ရောက်မှုနှုန်းကို ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်က ခရီးသွားဧည့်သည် ဦးရေ ၅ ဒသမ ၅ သန်းခန့်အထိ ဝင်ရောက်ရန် ခန့်မှန်းထားသော်လည်း အမှန်တကယ် ဝင်ရောက်လာသူမှာ သုံးသန်းဝန်းကျင်ခန့်သာရှိခြင်းကြောင့် ယခုနှစ်အတွင်း ပြန်လည် ကောင်းမွန်ရန် မျှော်မှန်းထား ခြင်းဖြစ် သည်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းသို့ နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှု ၃ ဒသမ ၅ သန်းအထိရှိရန် မျှော်မှန်း ထားကြောင်း သိရသည်။
''အခုက လေဆိပ်ဝင်ပေါက် ကိုပဲကြည့်ပြီး တွက်စစ်တာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ကွာဟ သွားတယ်။ လက်ရှိမှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ပြီဆိုရင် ပိုမိုကောင်းမွန် လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်''ဟု မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင် များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကပြောသည်။
လက်ရှိခရီးသွား လုပ်ငန်း အခြေအနေမှာ Package Tour အနည်းငယ်သာ ဝင်ရောက် နေသော်လည်း တခြားပုံစံဖြင့် ခရီးသွားများ ဝင်ရောက်မှု တိုးတက်နေကြောင်း၊ ထို့ပြင်လေဆိပ်နှင့် အပျော်စီး သင်္ဘောများဖြင့်
လာရောက်သည့် နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည် ဦးရေလည်း တိုးတက်လာကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှ ခရီးသွားဧည့်သည်များ လာရောက်လည်ပတ်မှု အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တောင်ငူမြို့ရှိ တပ်မတော်ဆေးရုံ၌ တက်ရောက်ကုသမှု ခံယူနေသူများအား ကြည့်ရှုအားပေး
တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်ြမတ်ကျော် ဆေးကုသ မှုခံယူနေသူများကို ကြည့်ရှုအားပေးစဉ်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူမြို့ရှိ တပ်မတော်ဆေးရုံ၌ တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများနှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်လှည့်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့က ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စဉ် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသရန် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည့် ဒေသခံပြည်သူများအား ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မြတ်ကျော်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များက သွားရောက် တွေ့ဆုံအားပေးစကားပြောကြားပြီး တစ်ဦးချင်း၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေများကို မေးမြန်းကာ စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပေးအပ်သည်။
ထို့နောက် တိုင်းမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဆေးရုံအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒေသခံပြည်သူများ၏ စားရေးအထောက်အကူဖြစ်စေရန် တန်ဖိုးသင့်ထမင်းနှင့် ဟင်းလျာများ၊ အသီးအရွက်များနှင့် အသားငါးများအား ဆက်လက်ရောင်းချ
တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့များက တန်ဖိုးသင့်ထမင်းနှင့်ဟင်းလျာများ ရောင်းချပေးစဉ်။
ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ စားရေးတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ လျှော့ချပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အသီးသီးရှိ ဘက်စုံစိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးခြံများမှ ထွက်ရှိသော အသား၊ ငါးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥများ၊ ကျန်းမာရေး နှင့်ညီညွတ်သော တန်ဖိုးသင့် ထမင်းနှင့်ဟင်းလျာများကို တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အသီးသီးရှိကွပ်ကဲမှု အောက် တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့များက တပ်နယ်များ၌ ဒေသခံပြည်သူများ အားဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် စီစဉ်ရောင်းချပေး လျက်ရှိသည်။
ထိုသို့ရောင်းချပေးလျက်ရှိရာ ယနေ့တွင် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ မြို့သစ်ကြီးရပ်ကွက်၊ ကြက်ပေါင်ခြံရပ်ကွက်၊ ပြည်ထောင်ကျေးရွာနှင့် ဗန်းမော်မြို့ရှိ ခွန်သာ ရပ်ကွက်တွင်လည်းကောင်း၊ အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၌ လားရှိုးမြို့၊ အမှတ် (၉) ရပ်ကွက်ရှိ ဘူတာဈေးနှင့် နားမခေါ်အဝေးပြေး ကားဝင်း၊ သီပေါမြို့မဈေးနှင့် ပြည်သူ့ဆေးရုံရှေ့၊ ကျောက်မဲမြို့ဈေးနှင့် နမ့်လန်မြို့၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံရှေ့တို့တွင်လည်းကောင်း၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် တောင်ကြီးမြို့၊ ဘုရားဖြူရပ်ကွက်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ လွယ်မောကျေးရွာနှင့် လွိုင်ကော်မြို့၊ လောပိတကျေးရွာ တို့တွင်လည်းကောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ ခိုလမ်မြို့ဈေး အနီးတွင်လည်းကောင်း၊ တြိဂံဒေသ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ ကျိုင်းတုံမြို့၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ကောက်ကော့ (၂) လမ်း၊ နောင်နွန်းရပ်ကွက်၊ ယန်းလူးဈေးရှေ့နှင့် မိုင်းခတ်မြို့မဈေးတို့တွင်လည်းကောင်း၊ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ မော်လမြိုင်မြို့၊ ကမ်းနားလမ်းရှိကျောက်မီးသွေးဆိပ်ကမ်းအနီးနှင့် သထုံ တံတားအနီး၊ ကော့ကရိတ်မြို့၊ ချောင်းတောင်ရပ်ကွက်၊ ရဲစခန်းလမ်းထောင့်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့၊ (ဃ) ရပ်ကွက်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့၊ အောင်ကုသိုလ်ရပ်ကွက်နှင့် ဘားအံမြို့၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊ ပြည်သူ့ဈေးအနီး တို့တွင်လည်းကောင်း ဒေသခံပြည်သူများအတွက် တန်ဖိုးသင့် ထမင်း၊ ဟင်းလျာများနှင့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အသားငါးများကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အသီးသီးရောင်းချပေး ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။